I-Arch Linux + KDE Ukufaka Log: Ukufakwa kwe-KDE SC | Kusuka kuLinux
Sivele sabona ukuthi kanjani faka i-Arch Linux bese ulungisa uhlelo, ngakho-ke manje yisikhathi sokufaka KDE okuyi-Desktop Environment engiyisebenzisayo.
Into yokuqala okufanele siyifake amaphakheji ahlobene ne-Xorg. Njengoba wonke umuntu enezidingo zakhe, okumele akwenze ukwenza:
Lokhu kuzobuyisa uhlu lwamaphakeji ahlobene ne-Xorg kanjena:
:: Kunamalungu angama-77 eqenjini le-xorg: :: Indawo eyengeziwe 1) font-misc-ethiopic 2) xf86-input-evdev 3) xf86-input-joystick 4) xf86-input-keyboard 5) xf86-input-mouse 6) xf86-input-synaptics 7) xf86-input-vmmouse 8) xf86-input-void 9) xf86-video-ark 10) xf86-video-ast 11) xf86-video-ati 12) xf86-video-cirrus 13 xf86-video-dummy 14) xf86-video-fbdev 15) xf86-video-glint 16) xf86-video-i128 17) xf86-video-intel 18) xf86-video-mach64 19) xf86-video-mga 20) xf86 -video-modesetting 21) xf86-video-neomagic 22) xf86-video-nouveau 23) xf86-video-nv 24) xf86-video-openchrome 25) xf86-video-r128 26) xf86-video-savage 27) xf86 - ividiyo-siliconmotion 28) xf86-video-sis 29) xf86-video-tdfx 30) xf86-video-trident 31) xf86-video-v4l 32) xf86-video-vesa 33) xf86-video-vmware 34) xf86- ividiyo -voodoo 35) xorg-bdftopcf 36) xorg-docs 37) xorg-font-util 38) xorg-fonts-100dpi 39) xorg-fonts-75dpi 40) xorg-fonts-encodings 41) xorg-iceauth 42) xorg- I-luit 43) xorg-mkfontdir 44) xorg-mkfontscale 45) xorg-server 46) xo i-rg-sessreg 47) xorg-setxkbmap 48) xorg-smproxy 49) xorg-x11perf 50) xorg-xauth 51) xorg-xbacklight 52) ​​xorg-xcmsdb 53) xorg-xcursorgen 54) xorg-xdpyinfo 55) xorg-xdriinfo 56) xorg-xev 57) xorg-xgamma 58) xorg-xhost 59) xorg-xinput 60) xorg-xkbcomp 61) xorg-xkbevd 62) xorg-xkbutils 63) xorg-xkill 64) xorg-xlsatoms 65) xorg-xlsclients 66) xorg-xmodmap 67) xorg-xpr 68) xorg-xprop 69) xorg-xrandr 70) xorg-xrdb 71) xorg-xrefresh 72) xorg-xset 73) xorg-xsetroot 74) xorg-xvinfo 75) xorg-xwd 76) xorg-xwininfo 77) xorg-xwud Faka ukukhetha (okuzenzakalelayo = konke):
Kumele sikhethe lezo esizifunayo futhi kuphele lapho, sibeke inombolo ngaphambi kwalokho esifuna ukukufaka. Endabeni yokuba ngaphezu kokukhethwa kukho okukodwa, senza ukukhetha okuningi okuhlukanisa izinombolo ngokhefana.
Manje ukufaka KDE singakwenza ngezindlela ezi-3
Lokhu kuzofaka amaphakheji toooooodoooossss KDE. Le nketho ithatha isikhathi eside kakhulu kuwo wonke amaphakheji owadingayo ukuwalanda, kepha izosishiya i-Desktop Environment isilungile, ngakho konke esikudingayo ngisho nalokho esingakudingi.
Le nketho isivumela ukuthi silawule okungaphezulu kwalokho esifuna ukukufaka, ngoba kusivumela ukuthi sikhethe amaphakethe we-meta ahlobene nemisebenzi ehlukile ye-KDE. Le kwakuyindlela engangiyisebenzisa futhi yonke into yangisebenzela okokuqala.
Uma sazi ukuthi yini esiyifunayo nokuthi yini okudingeka siyifake kamuva, le nketho isebenza kahle kithina ngoba ifaka kuphela lokho okudingekayo kithi KDE isebenza kahle. Ngemuva kwalokho sizofaka amaphakheji esizowasebenzisa.
Kuthiwani uma singenakukhohlwa ukufaka iphakheji kanye nanoma iyiphi yalezi zinketho:
Manje kwenzenjani I-KDM qala kufanele senze kusebenze insiza:
Futhi yilokho kuphela. Siqala kabusha futhi singangena kweyethu KDE.
Amanye amathuluzi awusizo
Lapho i-KDE isiqedile, wonke umuntu kufanele aqhubeke nokufaka amaphakheji awadingayo. Mina, kunezicelo eziningi engizisebenzisayo, engizibhala ngezansi:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » I-Arch Linux + KDE Ukufaka Log: Ukufakwa kwe-KDE SC
Umbuzo; Okufakayo kungama-binaries noma ingabe uyalanda imithombo bese uyahlanganisa? Uxolo uma ngibuza ubuqiniso, kepha angiyazi i-distro futhi engikuzwile ukuthi ihlangana ngesitayela se-gentoo.
AmaBinaries. Ukuhlanganiswa kungakhethwa, ngokusebenzisa imibhalo elula yokwakha, engaxazululi ukuncika, futhi engaphathi izinketho zokuhlanganisa; ngamanye amazwi, ayifani neze neGentoo.
Usanda kungisiza ukuthi ngigxume ukuzama i-Arch kanye (bengilokhu ngifuna iminyaka eminingana, kepha ngihlala ngikuyeka lokhu (selokhu ngiqala ukuhlanganisa ngisebenzisa kangcono i-FreeBSD 😉)).
Ngijabule ukukuphakela 🙂
Zama i-MANJARO, i-Arch yabantu
Ukufaka okulula njengo-Ubuntu
Futhi-ke uma ufuna, unawo wonke amandla we-arch wokumisa
Yonga isikhathi esiningi
I-Arch _es_ yabantu 😉
Yize kunjalo, iManjaro yakhiwe kahle futhi igcina isikhathi esiningi ekufakweni kwayo, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngazama i-0.86 Openbox futhi isebenza kahle impela, ngiyithanda kakhulu kune-ArchBang!
Vele, inguqulo ye-KDE SC yeManjaro yinto ekhuluphele futhi embi kunazo zonke engake ngazibona>: [
I-Arch yabantu i-hahaha engenze ngahleka, iqiniso ukuthi ukufaka i-arch akunzima kakhulu kukuthatha isikhashana okokuqala kepha uma usujwayele, ushiya i-OS yakho njengoba ufuna, ngaphandle kwalokho okungcono i-archwiki ku-andoid yakho ukuyilandela!! Ngishiya isixhumanisi kulabo abafuna! imikhonzo Ariki
Umbuzo owodwa… Usebenzisa yiphi itimu ye-plasma? Ngabe uzosebenzisa i-qtcurve? I-Smaragd?
Ngisebenzisa ingqikithi evulekileSUSE. Futhi yebo, ngisebenzisa iQtCurve futhi.
Ngengqikimba ye-plasma ye-Kde, usho ukuthi uProdukt? Kuleso simo kunhlobonhlobo yoqobo (amathoni ewolintshi) noma inguqulo efakwe ku-opensuse 12.3 (amathoni aluhlaza), uma eyokugcina, ungayihlanganyela?
Yebo, ngisho ukuhluka okuvulekileSUSE. Ungayilanda kusuka lapha.
Uxolo i-elav, kepha kungani uzakhela i-Arch + KDE yakho uma usunayo i-distro enezibuyekezo ezinhle ngokwedlulele, okuyi-CHAKRA?
Ukwazi nje ukuthi kungani, mhlawumbe ubungazikhipha zonke lezi zinyathelo, kepha ngendlela efanayo obongwa ngayo, engezwe kuzintandokazi!
Angikuthandi ukuthi balawula izinhlelo zokusebenza engifuna ukuzifaka, futhi ngisebenzisa ezinye eziyi-GTK. Ngabe izinqolobane zeChakra ziyefana nezika-Arch? Uma kungenjalo, akusebenzi kimi, ngoba kuzodingeka ngilande amaphakheji we-Intanethi futhi ukuxhumana kwami ​​kungangisizi ngalokho. Ngicabanga ukuthi lezi yizizathu ezimbili eziyinhloko.
Abacibisheli 27 kusho
KwiChackra ISO yakamuva kufakwe i-netinstall ekuvumela ukuthi wenze ukufakwa okuncane, okufana ne-Archlinux's kdebase. Babuye bashiya eceleni izinyanda futhi manje bafaka enye indawo yokugcina yezinhlelo zokusebenza ze-GTK.
Kepha ngingawasebenzisa amakhosombe afanayo e-Arch?
Cha, izinqolobane azifani. Kunezindlela zokuzisebenzisa, kepha akunconyiwe.
Okubuhlungu-ke ukuthi uChakra akangisebenzisi 🙁
Futhi uke wazama iSlackware 14? Ngiyizamile futhi i-KDE ibukeka njenge-XFCE. Ngiyithanda kakhulu leyo distro ngoba ungalungisa nge-slapt-get bese ungeza ukuncika ngakunye nge-slackpkg.
Okuhamba phambili: ikhonsoli yayo eyenziwe kahle (ikusiza ufinyelele emininingwaneni emincane kakhulu).
I-Test MANJARIO yi-ex Chakra kepha ngaphezu kokuthi ilula ideskithophu enhlobonhlobo futhi iyahambisana ngokuphelele ne-arch.
Gcina isikhathi esiningi ngokusetha okuhle kakhulu nokufakwa okufana nobuntu
Isiphakamiso esincane ukuze kuthi lapho ukufakwa kwesisekelo kwenziwa kuhlala kusebenza okungenani, kunconywa ukuthi kungezwe i-phonon-vlc, ngakho-ke umyalo uzoba:
ngaphandle kwalokho umhlahlandlela omuhle walabo abangasalokothi.
Imvamisa lapho ufaka i-kde pacman ikubuza ukuthi iyiphi i-phonom ongayifaka.
Kunjalo ... uma wenza i-pacman -S kdebase pacman ikubuza ukuthi iyiphi i-phonon ofuna ukuyifaka ...
Ngiyamthanda pacman! 😀
Kudala ngangine-Arch ne-Gnome, i-Xfce ne-KDE
Ngangihlala ngishaya izibuyekezo ezinkulu futhi ngashintsha ngobuvila
Kepha i-Arch yi-Arch, amagama amakhulu 😉
Sebenzisa iSlackware. Kuthambile, kepha hhayi ezingeni i-Arch enalo.
I-elav, ngenza isiphakamiso: shicilela umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo ekufakweni kwe-Arch nge-LVM ebethelwe futhi ngosizo lwe-TRIM lwe-SSD ngifuna ukufaka i-Arch kwi-laptop yami, kepha hhayi kumhlahlandlela wokufaka osemthethweni awucabangi ngalokhu, futhi Ngicabanga ukuthi kungasiza abantu abaningi. Siyabonga futhi okuhle kakhulu.
Ngingathanda ukukusiza kepha anginayo i-SSD yokwenza izivivinyo ngayo .. 🙁
Yebo, ingxenye ye-SSD incane kakhulu, kepha ngiyakhumbula ngokungafanele bekuwukubeka inketho ku-cryptab, enye ku-lvm nenye kuma-partitions. Kepha ukufakwa kohlelo olubethelwe nge-100% ne-LVM kuyinkimbinkimbi. Ngingakuthola uma ufuna isixhumanisi ebenginaso esichaze inqubo kancane kepha kuGentoo, kungahle kusize: p
I-Arch inhle kakhulu, kepha indlela ye-arch ifilosofi ye-KISS + RTFM, ngakho-ke ngingafaka iMATE + Openbox bese ngifaka i-Iceweasel njengesiphequluli esizenzakalelayo.
Ngaphandle kwalokho, ngabe kuzoba khona uhlobo lwe-LTS lwe-Arch oluzosetshenziswa?
Usebenzisa i-ArchLinux futhi ngenxa yemihlahlandlela yayo yokufaka.
Ake sibheke ukuthi ngelinye ilanga ngizama i-ARCH, Ngenkathi ngisekhona neMageia 3 enezakhiwo ze-KDE 4.10.4 X86_64
Angitholi umdlali onjenge-winamp ye-kde D:
I-qmmp ingomunye wabadlali abazwakala kahle kakhulu ku-linux futhi ifana kakhulu ne-winamp. Kubhalwe ku-qt. Isilinganisi sihle yize sineziteshi ezimbalwa.
I-Google Audacious, bese ungitshela ukuthi ngabe uthole i-Winamp efana neLinux.
Ngibe no-Arch cishe iminyaka emihlanu futhi inqobo nje uma amakhompyutha ami amabili (ideskithophu eneminyaka emihlanu kanye ne-netbook enonyaka owodwa ubudala) esekela ukukhishwa kwale distro, angizukuyishintsha nganoma yini, lapho angisakwazi ukuwadlulisela ku-Debian. Bengisebenzise i-Openbox ku-netbook nakwideskithophu isikhathi eside kepha bengisangene futhi ngifaka i-KDE encwadini yokubhalela ukuze ngiyivivinye. Ngiyithande kakhulu i-KDE, into embi ukuthi idla ibhethri, ku-Openbox (ngemuva kokuyilungiselela) ibidinga kuphela imizuzu eyi-10 ukugcina amahora ama-3 ihlale ku-Windows futhi nge-KDE ihlala amahora amabili kuphela noma ngabe mingaki izinhlelo noma izilungiselelo engizishintshayo.
Ekugcineni, i-Arch Linux icela ukunakwa okuningi noma okuningi kunentombi yakho: uma ungayibuyekezi esikhathini esingaphezu kwenyanga bese unquma ukuyivuselela ngokuzumayo, izophuka, uma uyivuselela ngaphandle kokufunda izindaba nakanjani uzokuthola yihlephule. Ngakho-ke, ungayilahli le distro futhi uma ufuna okuthile, hlola kuqala ukuthi kunjani
Kungcono njalo ukuthi ube ne-cd ebukhoma esetshenziswayo ukufaka indawo esemthethweni futhi ufunde ukuthi ungaxazulula kanjani umbuzo.
By the way: ukulanda i-arch !!!!
Le distro idonsa ukunaka kwami, ngizobona ukuthi kule mpelasonto nginesikhathi sokuyihlola.